नायिका प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराज जोशी आमा बाबु बनेका छन्। बुधबार कार्कीले छोरी पाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन्।
सामाजिक संजालमार्फत प्रियंका र पति आयुष्मान देशराज जोशीले शिशु बोकेको तस्विर सार्वजनिक भएको हो। उनीहरूले छोरीको नाम आयन्का कार्की जोशी नामाकरण गरिसकेका छन्।
यो पनि : विराटनगर– नेपालमा पछिल्लो समय अत्याधुनिक सुविधा सहितका बसहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । नेपालका मुख्य ७ वटा सहरबाट बसभित्रै शौचालयको व्यवस्थापन भएको बुलेट एसी बस सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
बुलेट एसी प्रा.लि.ले देशभरका सात सहरका लागि काठमाडौँ देखि यो बस सञ्चालन गर्ने भएको हो । विराटनगर–काठमाडौँको लागि १ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ पर्ने बु‘लेट बसको यात्रा भाडालाई दशैं अफरका रुपमा एक हजार ५०० रुपिँया कायम गरिएको ब्यवस्थापन कार्यालय विराटनगर बसपार्कका इन्चार्ज राजु धमलाले जानकारी दिनुभयो ।
यसमा सवार यात्रुका लागि कम्पनिले प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य कि‘ट उपलब्ध गराउने छ । व्यवस्थापक धमलाका अनुसार को‘रोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री किटमा समावेश गरिएको हुन्छ ।किट उपलब्ध गराए वापत यात्रुले छुट्टै रकम बुझाउनु पर्ने छैन ।
किटमा पानी, ग्लोब्स, मास्क र केहि रु‘घाखोकी लाग्दा से‘वन गर्ने औ‘षधीहरु समावेश गरिने छ ।सरोज न्यौपाने र उमेश खड्का लगायतले यो बुलेट बस प्रा.लि.मार्फत सातवटा बस संचालनमा ल्याएका हुन् । ५ करोड ५० लाखको लागतमा संचालनमा ल्याईएको बुलेट बसमा हवाई जहाजको जतिकै सुबिधा रहेको दा‘बी गरिएको छ ।
यात्राको लागि यात्रुले अनलाईन तथा बुकिङ काउटरबाट टिकट लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । बु‘लेट बस सञ्चालक समुहले २७ सिटर बस २÷१ सोफा ल‘क्जरि सिट सहितको बसहरु संचालनको तयारी समेत गरेको छ ।
गोकुल बास्कोटाले थर्काए ओलीलाई, दुईबीच चल्यो दोहोरी !
३१ मिनेट अगाडि
भीम रावल र घनश्याम भुसाल आउट !
एमाले अध्यक्षको लागि केपी ओली र भीम रावलबिच महाभिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
एमाले महाधिवेशन : साँझ ७ बजेपछि बन्दसत्र सुरु गर्ने तयारी
भीम रावललाई गलाउने ओलीको रणनीति, बन्दसत्रमा तनाव !
१९ घण्टा अगाडि
एमाले कार्यकर्ताबाटै खतरा भएपछि भीम रावल बसेको होटलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा !
काँग्रेस अधिवेशनमा लफडा, पूर्वमन्त्री शमशेरमाथि नै हातपात !
विधि र नियम अनुसार नचल्दा कांग्रेसको छवि विग्रदै गयोः प्रकाशमान सिंह
मुकुन्देको इन्दिरासँग ‘सरप्राइज’ इन्गेजमेन्ट, बिहे कहिले ?